Indawo yokuhlala kwiziko lembali laseAscoli Piceno
Indawo entle eyi-80m² esandula ukulungiswa kumgangatho wesibini nowesithathu wesakhiwo sakudala kwindawo enelanga, ezolileyo kude netrafikhi yesixeko. Ifulethi linandipha bonke ubutofotofo. Indawo nganye ikhathalelwe ukuya kutsho kwezona nkcukacha zincinci. Unokonwabela amagumbi okuhlambela amabini, enye yawo ikwiresin ngokupheleleyo kunye neshawari enkulu. Ilungele izibini, iintsapho kunye nohambo lweshishini. Indawo efanelekileyo yokuphumla kwaye ujabulele ukutshona kwelanga phezu kophahla lwesixeko.
Le ndlu igatyiswe ngokupheleleyo ngeparquet kwaye ikwimigangatho emibini. Ngokukodwa njengamagumbi okulala kunye namagumbi okuhlambela abekwe kumgangatho wokuqala ngelixa indawo yokuhlala enekhitshi kunye nethafa likumgangatho ophezulu.
Ubumelwane kwiziko lembali, kunye netrafikhi encinci kakhulu kwaye phantse abahambi ngeenyawo. Kwiindawo ezingqongileyo kukho zonke iintlobo zemisebenzi yorhwebo: imakethi, i-pub, ivenkile yepastry, indawo yokubhaka, ikhemesti njl.
Ngexesha lohlala andizubakho mntu kodwa bazakubakhona abanye abantu eninokuthi nibanxibelelanise nantoni na ekubeni yindlu le ndihlala kuyo ndirenta xa ndingekho emsebenzini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ascoli Piceno